Realme XT | Net Guide
Home Products Phones Realme XT
Realme ကနေ မျောဒယျအသဈတဈခုဖွဈတဲ့ Realme XT ကို စတငျထုတျလုပျရောငျးခခြဲ့ပွီး အခုဆိုရငျ မွနျမာနိုငျငံစြေးကှကျထဲမှာ ရောငျးအားကောငျးလကျြ ရှိပါတယျ။ ၎င်းငျးဖုနျးဟာ ကငျမရာစှမျးအား အလှနျကောငျးမှနျသလို ဘကျထရီစှမျးအားလညျး မွငျ့မားမှုရှိပွီး မကျြနှာပွငျ ကယျြပွနျ့ပါတယျ။ ဒါတငျမကသေးပဲ စကျစှမျးဆောငျရညျလညျး မွငျ့မားတာကွောငျ့ ပေးရတဲ့စြေးနှုနျးနဲ့ ထိုကျတနျမှုရှိတဲ့ အရညျအသှေးမွငျ့ အလယျအလတျတနျးစား စမတျဖုနျးတဈလုံးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အဘကျဘကျက ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ ဖုနျးတဈလုံးလို့ ပွောနိုငျပွီး လူငယျရော လူကွီးပါ ကွိုကျနှဈသကျတဲ့ ဒီဇိုငျးပုံစံရှိတာကွောငျ့ Realme Fans တှကေတော့ ဝယျယူသုံးစှဲကွမှာ သခြောပါတယျ။ ၎င်းငျးကို GSM, HSPA နဲ့ LTE networks တှမှော အဆငျပွပွေေ အသုံးပွုနိုငျပွီး Dual Nano SIM စနဈကို ထောကျပံ့ပေးထားတာကွောငျ့ SIM card2card ကို တဈပွိုကျနကျတညျး ထညျ့သှငျးသုံးစှဲနိုငျပါတယျ။
(1). Design & Build
ဒီဇိုငျးပုံစံကလညျး မကျြနှာပွငျကယျြ Drewdrop Display ဖွဈပွီး ရှငျးလငျးတောကျပွောငျမှု ရှိပါတယျ။ အရှဘေ့ကျနဲ့ နောကျကြောဘကျကို Corning Gorilla Glass5နဲ့ အခိုငျအခံ့ ဖုံးအုပျကာကှယျပေးထားပွီး Frame ကတော့ ပလပျစတဈပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကိုယျထညျတဈခုလုံးက ပွောငျလကျတောကျပနပွေီး နောကျကြောဘကျ ညာဘကျထောငျ့မှာ အနောကျ Camera4လုံး ဒေါငျလိုကျတညျရှိပွီး ၎င်းငျးတို့ဘေးဘကျမှာတော့ LED Falsh မီးလုံးကို တပျဆငျထားပါတယျ။ မကျြနှာပွငျအောကျထဲမှာ ယုံကွညျစိတျခစြှာ အသုံးပွုနိုငျတဲ့ Under Display Fingerprint Sensor ကို ထညျ့ပေးထားလို့ စမတျကကြ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ ကနျြတဲ့ ဖုနျးအစိတျအပိုငျးတှကေလညျး သူ့နရောနဲ့သူ သသေသေပျသပျ ရှိပါတယျ။ ဖုနျးအရှယျအစားက 158.7 x 75.2 x 8.6 mm (6.25 x 2.96 x 0.34 in) ရှိပွီး 183g လေးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုငျတှယျသုံးစှဲရတာ အနတေျော အရှယျအစားလောကျပဲဖွဈပွီး နောကျကြောဘကျဒီဇိုငျးက အရောငျပွေးလေးမို့ ဆနျးသဈလှပမှု ရှိပါတယျ။ ၎င်းငျးကို GSM, HSPA နဲ့ LTE networks တှမှော အသုံးပွုနိုငျပွီး Dual Nano SIM ဖွဈလို့ Nano SIM card2card ကို တဈပွိုငျနကျတညျး ထညျ့သုံးနိုငျပါတယျ။ ထုတျလုပျပေးထားတဲ့ အရောငျတှကေတော့ ဆနျးသဈလှပတဲ့ Pearl White နဲ့ Pearl Blue ဆိုတဲ့ အရောငျဆနျးလေး2မြိုးပဲ ဖွဈပါတယျ။
မကျြနှာပွငျက 6.4-inch အကယျြရှိပွီး Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors display နဲ့ ပွုလုပျထားပါတယျ။ ၎င်းငျးမကျြနှာပွငျက 19.5:9 ratio မှာ 1080 x 2340 pixels စှမျးအားရှိတဲ့ မွငျကှငျးတှကေို ပွသနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကယျြပွနျ့တဲ့ မကျြနှာပွငျက ကောငျးမှနျတဲ့ မွငျကှငျးစှမျးအားတှကေို ပွသပေးနိုငျတဲ့အပွငျ မကျြနှာပွငျပျေါမှာ Corning Gorilla Glass5နဲ့ ဖုံးအုပျကာကှယျပေးထားလို့ အကွမျးလညျး ခံပါတယျ။
(3). Operating System and Camera
Android 9.0 (Pie) ကို run ထားပွီး Android 10.0 ကို ထပျမံအဆငျ့မွှငျ့တငျနိုငျသလို အဆငျ့မွငျ့ Realme UI ကို ထညျ့ထားလို့ သုံးရတာ အဆငျ့မွငျ့မားပါတယျ။ အနောကျကငျမရာက 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.7″, 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.3, 13mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm +2MP, f/2.4, (macro), 1/5.0″, 1.75µm +2MP, f/2.4, (depth) စှမျးအားတှပေါရှိပွီး အရှကေ့ငျမရာက 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3″, 1.0µm စှမျးအား ရှိပါတယျ။
ဖုနျးစှမျးဆောငျရညျပိုငျးအတှကျ ၎င်းငျးမှာ RAM 4/6/8GB ပါရှိတဲ့ Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) processor 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) processor, Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) Chipset နဲ့ Adreno 616 တို့ကွောငျ့ အကောငျးဆုံး စှမျးဆောငျရညျတှကေို အပွညျ့အဝ ထောကျပံ့ပေးနိုငျပါတယျ။
ဘကျထရီစှမျးအားအနနေဲ့တော့ Non-removable Li-Po 4000 mAh battery ကို ထညျ့သှငျးပေးထားတာကွောငျ့ လုပျဆောငျခကျြတှကေို အခြိနျကွာမွငျ့စှာ ပွုလုပျနိုငျတဲ့အပွငျ Fast battery charging 20W (VOOC Flash Charge 3.0) စနဈလညျး ပါရှိပါတယျ။
» Display : 6.4 inches, Super AMOLED capacitive touchscreen
» Memory : 128GB, 8GB RAM, microSDXC
» Camera : Quad : 64+8+2+2 MP / Single : 16 MP (Front)
» OS : Android 9.0 (Pie)
» Price : 459,900 Ks
» Phone : 09-787222888 (Win Mobile World)
Realme ကနေ မော်ဒယ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Realme XT ကို စတင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ထဲမှာ ရောင်းအားကောင်းလျက် ရှိပါတယ်။ ၎င်းဖုန်းဟာ ကင်မရာစွမ်းအား အလွန်ကောင်းမွန်သလို ဘက်ထရီစွမ်းအားလည်း မြင့်မားမှုရှိပြီး မျက်နှာပြင် ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပဲ စက်စွမ်းဆောင်ရည်လည်း မြင့်မားတာကြောင့် ပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ ထိုက်တန်မှုရှိတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် အလယ်အလတ်တန်းစား စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဘက်ဘက်က ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးလို့ ပြောနိုင်ပြီး လူငယ်ရော လူကြီးပါ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဒီဇိုင်းပုံစံရှိတာကြောင့် Realme Fans တွေကတော့ ဝယ်ယူသုံးစွဲကြမှာ သေချာပါတယ်။ ၎င်းကို GSM, HSPA နဲ့ LTE networks တွေမှာ အဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုနိုင်ပြီး Dual Nano SIM စနစ်ကို ထောက်ပံ့ပေးထားတာကြောင့် SIM card2card ကို တစ်ပြိုက်နက်တည်း ထည့်သွင်းသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
ဒီဇိုင်းပုံစံကလည်း မျက်နှာပြင်ကျယ် Drewdrop Display ဖြစ်ပြီး ရှင်းလင်းတောက်ပြောင်မှု ရှိပါတယ်။ အရှေ့ဘက်နဲ့ နောက်ကျောဘက်ကို Corning Gorilla Glass5နဲ့ အခိုင်အခံ့ ဖုံးအုပ်ကာကွယ်ပေးထားပြီး Frame ကတော့ ပလပ်စတစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးက ပြောင်လက်တောက်ပနေပြီး နောက်ကျောဘက် ညာဘက်ထောင့်မှာ အနောက် Camera4လုံး ဒေါင်လိုက်တည်ရှိပြီး ၎င်းတို့ဘေးဘက်မှာတော့ LED Falsh မီးလုံးကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အောက်ထဲမှာ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Under Display Fingerprint Sensor ကို ထည့်ပေးထားလို့ စမတ်ကျကျ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ဖုန်းအစိတ်အပိုင်းတွေကလည်း သူ့နေရာနဲ့သူ သေသေသပ်သပ် ရှိပါတယ်။ ဖုန်းအရွယ်အစားက 158.7 x 75.2 x 8.6 mm (6.25 x 2.96 x 0.34 in) ရှိပြီး 183g လေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုင်တွယ်သုံးစွဲရတာ အနေတော် အရွယ်အစားလောက်ပဲဖြစ်ပြီး နောက်ကျောဘက်ဒီဇိုင်းက အရောင်ပြေးလေးမို့ ဆန်းသစ်လှပမှု ရှိပါတယ်။ ၎င်းကို GSM, HSPA နဲ့ LTE networks တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး Dual Nano SIM ဖြစ်လို့ Nano SIM card2card ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ထည့်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ အရောင်တွေကတော့ ဆန်းသစ်လှပတဲ့ Pearl White နဲ့ Pearl Blue ဆိုတဲ့ အရောင်ဆန်းလေး2မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်နှာပြင်က 6.4-inch အကျယ်ရှိပြီး Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors display နဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ၎င်းမျက်နှာပြင်က 19.5:9 ratio မှာ 1080 x 2340 pixels စွမ်းအားရှိတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို ပြသနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျယ်ပြန့်တဲ့ မျက်နှာပြင်က ကောင်းမွန်တဲ့ မြင်ကွင်းစွမ်းအားတွေကို ပြသပေးနိုင်တဲ့အပြင် မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ Corning Gorilla Glass5နဲ့ ဖုံးအုပ်ကာကွယ်ပေးထားလို့ အကြမ်းလည်း ခံပါတယ်။
Android 9.0 (Pie) ကို run ထားပြီး Android 10.0 ကို ထပ်မံအဆင့်မြှင့်တင်နိုင်သလို အဆင့်မြင့် Realme UI ကို ထည့်ထားလို့ သုံးရတာ အဆင့်မြင့်မားပါတယ်။ အနောက်ကင်မရာက 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.7″, 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.3, 13mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm +2MP, f/2.4, (macro), 1/5.0″, 1.75µm +2MP, f/2.4, (depth) စွမ်းအားတွေပါရှိပြီး အရှေ့ကင်မရာက 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3″, 1.0µm စွမ်းအား ရှိပါတယ်။
ဖုန်းစွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက် ၎င်းမှာ RAM 4/6/8GB ပါရှိတဲ့ Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) processor 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) processor, Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) Chipset နဲ့ Adreno 616 တို့ကြောင့် အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို အပြည့်အဝ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဘက်ထရီစွမ်းအားအနေနဲ့တော့ Non-removable Li-Po 4000 mAh battery ကို ထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့် လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အပြင် Fast battery charging 20W (VOOC Flash Charge 3.0) စနစ်လည်း ပါရှိပါတယ်။
Previous articleVivo V15 VS Vivo V15 Pro
Next articleMight & Magic : Chess Royale
iPhone 11 Pro Max! – HDR 10, Dolby Vision